Madaxweynaha Oo Ka Qeybgalay Munaasabad Casho Sharaf Uu Gudoomiyaha Baarlamaanka U Sameeyey Xildhibaannada Ka Kala Socda Puntland Iyo Galmudug “SAWIRRO”
Ka hor casho sharafta uu Gudoomiyaha Baarlamaanka u sameeyey wafdigan ka socday maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxey si wadajir ah kulan ula qaateen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari wafdiga Baarlamaannada ah ee ay kala hogaaminayeen Gudoomiyeyaasha Baarlamaannada Puntland iyo Galmudug oo iyagu Madaxda sare ee Dalka uga waramay xaaladaha hormarineed ee ka jira labada maamul.
Kulankaasi kadib ayaa waxaa guriga Martida ee magaalada Muqdisho ka bilaabatay casho sharaf uu Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya u sameeyey wafdiga ka kala socda Baarlamaannada Puntland iyo Galmudug ayadoo casho sharaftanna ay sidoo kale kasoo qeybgaleen Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Ugu horeyn Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlay Munaasabadda casho sharafta ah ayaa uga mahad celiyey Gudoomiyeyaasha Baarlamaannada Puntland iyo Galmudug sida ay ugasoo jawaabeen casuumaad uu u fidiyey Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo la xiriirta iney Gudoomiyeyaashan kasoo qeybgalaan xeritaanka Kalfadhiga Labaad ee Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Mudane C/rashiid Maxamed Xirsi oo isaguna ka hadlay Munaasabadda casho sharafta ah ayaa uga mahad celiyey Gudoomiyaha Baarlamaanka sida sharafta leh ee ay u marti qaadkaan ugu fidiyeen hogaanka Baarlamaannada maamul goboleedyada Dalka ka jira waxaana uu talaabadan lagu casuumay ku tilmaamay mid muujineysa in Baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhaqmayo habka Federaalka.
Sidoo kale Gudoomiyaha Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Mudane Xasan Maxamed Heyl oo isaguna ka hadlay Munaasabadda casho sharafta ah ayaa dhankiisa ka mahad celiyey marti qaadka loo sameeyey wafdiga ay kala hogaaminayaan Gudoomiyeyaasha Baarlamaannada Puntland iyo Galmudug waxaana uu ammaanay sida ay xiligan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u muujiyeen isbedelka dowladnimo ee dalka ka hanaqaaday.
Casho sharaftan uu caawa Gudoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u sameeyey Wafdigan ka socday Baarlamaannada maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa kusoo gebageboowday jawi wanaagsan waxaana imaanshaha wafdigan uu ka dambeeyey kadib markii uu Gudoonka Baarlamaanka ku marti qaaday iney kasoo qeybgalaan xeritaanka kalfadhiga Labaad ee Baarlamaanka.